(tonga teto avy amin'ny Fivavahana kristianna)
Ny kristianisma dia finoana abrahamika mino an'Andriamanitra tokana, izay mifototra amin'ny soratra navelan'ny apostoly (evanjely na filazantsara) mikasika ny fiainan'i Jesoa avy any Nazareta, na Jesoa Kristy. Roa arivo taona taorian'ny nahafatesany, dia miisa eo amin'ny 2 000 000 000 eo ho eo ny mpino, miparitaka anaty antokom-pangonana 33 000; ka ny lehibe indrindra amin'izy ireo dia ny Fiangonana katôlika.
Ny mpamaritra anarana kristianina dia midika hoe "an'i Kristy", na "mpanaraka ny fampianaran'i Kristy". Io mpamaritra io dia nomen'ny daholobe an'ireo mpanaraka ny fampianaran'i Kristy nanomboka ny taonjato voalohany.
Ny Testamenta Taloha – ny Baiboly hebreo – miaraka amin'ny Testamenta Vaovao no soratra ifotoran'ny finoana kristianina.
2.2 Fisarahan'ny Andrefana sy ny Atsinanana
Fanaovam-batisa an'i Jesoa, sary nataon'i Almeida Júnior, 1895
Amin'ny Kristiana dia i Jesoa no Mesia na Kristy. Inoan'ny Kristiana ho voahosotr'Andriamanitra sy nirahina ho ety ambonin'ny tany hanavotra ny olombelona amin'ny alalan'ny fahafatesany sy ny fitsanganany ho velona i Jesoa.
Ny fiangonana kristiana sasany dia nandray fanekem-pinoana izay nolovana tamin'ireo konsily tany aloha fa ny sasany dia tsy manana na nanampy fanekem-pinoana famenony azy manokana. Ny malaza indrindra amin'ny fanekem-pinoana kristiana dia ny Faneke-mpinoana apostolika sy ny Fanekem-pinoan'i Nikea-Konstantinopoly.
Ny ankamaroan'ny fiangonana kristiana dia mino ny atao hoe Trinite, izany hoe ny maha tokana nefa misy persona telo an'Andriamanitra. Ireo persona ireo dia ny Ray sy ny Zanaka (na ny Teny) ary ny Fanahy Masina. Tsy andriamanitra telo izany.
Nanomboka tany amin'ny fotoana lazaina fa nilatsahan'ny Fanahy Masina tàmin'ny Apostoly sy nanombohany nitory ny filazantsara no azo lazaina fa nanombohan'ny fivavahana kristiana nefaahaleo tena ka tsy nikambana intsony tamin'ny fivavahana jiosy. Niely tany Asia Minora sy Eorôpa Atsimo ary amin'ny tapak'i Afrika avaratra ny fivavahana kristianina ka isan'ny nandray anjara betsaka i Paoly. Nisy ny fanenjehana ny Kristiana nataon'ireo Jiosy sy ny Romanina.
Taty aoriana dia lasa fivavaham-panjakana ny kristianisma ka i Roma no renivohitra tamin'izany. Nitombo hery ny Papa nefa nisy ny fiangonana sy mpanjaka na andriana izay nitady fahaleovan-tena ara-pôlitika sy ara-pivavahana. Nampiforona ny Fanavaozam-piangonana (atao hoe koa Refôrma na Reformasiona) izany.
Noho ny tokony hisian'ny filaminan'ny raharaha fehezin'ny Papa sy ny Eveka hafa rehetra sy ny tokony hananan'ny Fiangonana fampianaram-pinoana mitovy dia nisy matetika ny atao hoe kônsily na sinôda izay fivoriana anasana ny eveka rehetra sy andraisany anjara. Ny emperora matetika no mamory. Maro ny fehin-kevitra nivoaka avy tamin'ireo kônsily ireo ka isan'izany ny fanekem-pinoana sasany iraisan'ny fiangonana. Tamin'ny fotoana nampisy ireo konsily ireo koa no nisianan'ny fanenjehana mafy an'ireo atao hoe heretika na mpanao fampianaran-diso.
Fisarahan'ny Andrefana sy ny AtsinananaHanova
Noho ny tsy fifanarahana amin'ny lafiny teôlôjika sy hafa koa, na dia teo aza ny fanaovana kônsily sy ny fomba hafa hisian'ny fitovian-kevitra na ny marimaritra iraisana, dia nivaky roa ny fivavahana kristiana ka i Rôma sy i Kônstantinôpôlisy (na Kônstantinôpla) no lasa renivohitry ny fiangonana roa (dia ny Fiangonana tandrefana na Katôlika rômana sy ny Fiangonana tatsinanana na Ôrtôdôksa).
Taorian'ny fanavaozam-piangonana (refôrmasiôna na reforma) nataon-dry Lotera sy ny namany izay te hanitsy ny fanao sasantsasany tao amin'ny Fiangonana katôlika dia niforona ny Prôtestantisma izay tsy niankina intsony tamin'ny Fiangonana katôlika; avy eo taty aoriana dia niorina koa ireo fiangonana maro atao ankehitriny hoe evanjelika (na ara-pilazantsara) izay miezaka miparitaka eran-tany.
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Kristianisma&oldid=997772"
Dernière modification le 8 Oktobra 2020, à 12:18
Voaova farany tamin'ny 8 Oktobra 2020 amin'ny 12:18 ity pejy ity.